Girazi Edging Machine
Girazi Anoshanduka Angle Edging Machine
Girazi Wave Beveling Machine
Girazi Round Edge Kugaya Machine
Rakaumbwa Glass Edging / Beveling Machine
Girazi Sludge Dehydrator
10 mota dzinogadzira bhora rinotakura rinorema basa girazi rinotenderera muchina unodzora
Muchina uyu une mota nhanhatu dzinogona kugadzirisa girazi repazasi uye kumberi arris (0-45 degree), iine 2 motors yekumberi kusona uye 2 mota yekumashure kusona. Muchina uyu unoshandisa KUTAKURA KUSVIRA SYSTEM. Iyo inokodzera girazi diki (40mmx400mm) uye rinorema girazi (4mx4m) kugadzirisa. Muchina une girazi ukobvu unodzivirira mashandiro. Kana chisina kukora girazi rakaiswa mumushini, muchina unomira wega. Izvi zvinodzivirira mabheyaringi kubva pakupwanya. Muchina unotora PLC kudzora uye opareta interface. Iyo yekumhanyisa kumhanya inogona kugadziriswa kuburikidza neasina nhanho mutongi. Girazi rakagadziriswa pamusoro rakajeka uye rakatsetseka, richisvika kune yekutanga girazi pamusoro. Muchina uyu unoratidzwawo nehupamhi hwekugadzirisa huwandu uye nyore kushanda.
11 motors otomatiki bhora rinotakura akasiyana angle girazi rinotenderera rinodzora muchina
Muchina uyu une 6 mota (Nha. 1-Nha. 6) iyo inogona kugadzirisa girazi repasi uye kumberi arris (0-60 degree), 3 mota (Nha. 7-Nha. 9) iyo inogona kugadzirisa girazi ngowani kumucheto uye zvakare pasi. kumucheto, iine 2 motors yekumashure yekusona. Maitiro ese apedzwa pakufamba kumwe. Kugadzira kutenderera / kupora, No.1-Nha. 6 mota dzinofanirwa kugara paZero degree uye Nha. 7-9 mota inogona kuchinjirwa kuita 45 degree kumberi kwema arris. Kugadzira ngowani uye yepazasi kumucheto, Nha. 1-Nha. 6 mota dzinogona kuchinjirwa padanho rakakumbirwa uye wotendeuka Nha. 7-Nha. 9 motors kuZero degree rekumucheto kwekumucheto. Muchina uyu unoshandisa KUTAKURA KUSVIRA SYSTEM. Iyo yakakodzera girazi diki (40mmx40mm) uye rinorema girazi (4mx4m) kugadzirisa.
15 motors otomatiki bhora rinotakura akasiyana angle girazi rinotenderera muchina unodzora
Chikamu chekutanga mamota matanhatu (Nha. 1-Nha. 6) girazi repazasi kumucheto uye kumberi miter kumucheto (0-60 degree), 2 mota (Nha. 7-Nha. 8) yekumashure arris seaming uye 2 mota (Nha. 9-Kwete 10) yepamberi arris seaming. Kwete. 11. Kwete. 12 uye Nha. 13 motors ndezvekucheka kumucheto kwepasi uye yekupedzisira kupora kana Nha. 1-Nha. 6 mota dzemberi gadziriso. Mavhiri maviri ekupedzisira ndeepamberi uye kumashure arris polishing. Maitiro ese apedzwa pakufamba kumwe.
Muchina uyu unoshandisa KUTAKURA KUSVIRA SYSTEM. Iyo yakakodzera girazi diki (40mmx40mm) uye rinorema girazi (4mx4m) kugadzirisa. Mabhuraketi epamusoro dhizaini anogona kuita kuti vanofamba vachimhanya zvine mutsindo kushanda diki girazi 40mm saizi.
yakapetwa kaviri kutenderera mutsara wepamusoro girazi kupedzisa T yekufambisa tafura
Iyi tambo yekugadzira ine imwe yakangwara girazi saizi yekuyera tafura, mairi maviri edgers uye imwe L-Shape tafura yekuchinjisa. Chiteshi ichi chinowanikwa chekubatanidza tafura yekuyera neE ERP system uye kuongorora system kuti igadzirise otomatiki yekugadzira inoda. Tafura yegirazi yekuyera inoshandiswa kuendesa uye kuisa girazi kuti riongororwe, kuita chiyero chakaringana chehurefu, hupamhi uye ukobvu hwegirazi, uye nekuendesa iyo data kune maviri-kumucheto grinder uye zvimwe zvekugadzirisa zvigadzirwa zvekuenderera mberi girazi kugadzira.
double edger flat edgers full automatic
Iyi mbiri edger inogona kukuya / kupukuta maviri akati sandara mativi egirazi panguva imwe chete. Muchina uyu unotora PLC kutonga uye opareta interface.
Iyo nhare yekugaya chikamu inofamba ichiteedzana twin twin bhora rinotakura gwara. Iyo yekufambisa inoitwa kuburikidza nemapatya bhora rinotakura lead screws, iyo inotyairwa nemota ine break.
Kumuka / kudonha kwepamusoro kwekutevera system uye epamusoro arris motors anotyairwa nemamota. Inogona kuiswa otomatiki zvinoenderana akasiyana girazi ukobvu kuisa.
9 mota diki girazi beveling muchina PLC kudzora ZX261D 361D 371D
Muchina uyu wakagadzirwa kugadzira bevel pane ese madiki girazi uye hombe girazi. Iyo yekumashure yekufambisa track inogona kutamisirwa kumusoro uye pasi zvinoenderana negirazi saizi. Kune diki girazi saizi, iyo yekumberi yekufambisa track inogona kutamisirwa kumusoro. Kune rakakura girazi saizi, iyo yekumberi yekufambisa track inogona kutamisirwa pasi, inotora PLC kutonga uye opareta interface. Iyo Screen inogona kuratidza girazi ukobvu, bevel angle, bevel upamhi uye kumashure track track kukwirira.
Conveyors vanoshandisa hombe chinotenderera cheni inotumira system, girazi rinobata mapads rine dhizaini yekushanda girazi diki, inochinja mushure mekupera. Ichi chivimbo chinovimbisa girazi inofamba zvakanaka. Iyo yekushanda chaiyo yakakwira.
11 mota yekushandisa girazi beveler ine dijiti yekumhanya nyore kushanda
Muchina uyu wakagadzirirwa kugadzira bevel kumucheto, nechepazasi kumucheto kukuya. Iwo anotakura anoshandisa mapfupi-akabatanidzwa mahombe roller roller system. Kukuya vhiri rinotyairwa chaiko nemhando yepamusoro ABB mota. Iyo yekumhanyisa kumhanya inochinjika neisina nhanho mutongi. Iyo yepamberi njanji inotyairwa nemota yekuchinjika kune akasiyana magirazi ukobvu. Kukora kwegirazi uye nekumhanyisa kumhanya zvinoratidzwa pakuverenga kwedhijitari. Muchina uyu unoratidzwa nepamusoro kushanda nemazvo, kugadzikana mhando, nyore mashandiro uye pasi kupfeka.
otomatiki cheni sisitimu inoshanduka angle girazi rinotenderera muchina unodzora
Muchina uyu unogona kuita zvakajairika kumucheto kumucheto makorari, unogona zvakare kugadzira miter kumucheto kwe0-45 degree. Muchina uyu unoshandisa PLC kudzora uye inobata pani inoshanda sisitimu. Mushini unogona kumhanya otomatiki modhi uye manyore mode. Iko kumberi 4-6 mota dzinogona kugadzirisa kona kubva pa0 degree kusvika pa45 degree yekukwiza pasi kumucheto uye miter kumucheto.
6 motors kutenderera kumucheto OG kumucheto inonyanya kufarirwa girazi muchina
Muchina unogona kuburitsa yakatenderera, OG kumucheto, uye imwe mbiri mucheto pane yakati sandara girazi. Mberi yekufambisa inogona kufambiswa yakafanana kuti ienderane neakasiyana girazi ukobvu. Mavhiri maviri epamberi ekusona anokwanisa kubvisa arris yegirazi, iyo inoderedza basa remberi vhiri mavhiri, inowedzera nguva yehupenyu yeguruva vhiri uye kuwedzera kushanda kumhanya.
otomatiki rakarurama kuchera muchina mutsara ne PLC uye Servo system
Iyi girazi yekuchera muchina inogona kubatana neakaviri edging muchina kuti uite otomatiki mutsara. Inogona kushanda yakazvimiririra futi.
ZX100 girazi rekuchera muchina ne laser
Muchina uyu unotora nguva relay controller uye oiri buff tekinoroji. Iyo centering ye chibooreso gomba inogona kumisikidzwa pachishandiswa zvemakanika nzira kana laser. Pneumatic clamper inobata girazi ine chinogadziriswa kumanikidza. Muchina une maviri anoshanda chinzvimbo: manyorerwo & otomatiki. Mune manyore mode, muchina unongoshanda chete kutenderera. Mune otomatiki maitiro, muchina unoshanda uchienderera. Muchina uyu unoratidzwa nekushanda kwayo kwepamusoro, kukuvara kwegirazi kwakadzika uye mashandiro ari nyore.
cheni system otomatiki girazi rakapetana pamucheto makorari muchina puenmatic
Muchina uyu unoshandisa PLC kudzora uye inobata pani inoshanda sisitimu. Inoita yakakwenenzverwa kumucheto makorari, iyo pneumatic makorari system inoita kuti muchina uve neushamwari hwekushanda, girazi kupera rakanakisa. Mushini unogona kumhanya otomatiki modhi uye manyore mode. Conveyor shandisa cheni inotumira system, kushanda kumhanya kunochinjika kuburikidza nekumhanyisa regulator.
Kumabvazuva 13, Haiti Road, Gaoming, Foshan, Guangdong, China
Runhare:86 757 8631 3850